Beach Soccer : Manjaka tokana i Toliara -
AccueilVaovao SamihafaBeach Soccer : Manjaka tokana i Toliara
Beach Soccer : Manjaka tokana i Toliara
01/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Mbola ny ekipan’i Toliara hatrany no mitana ny laharana voalohany vonjimaika amin’ny filaharana ankapobeny amin’ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes eo amin’ny taranja beach soccer, sokajy lehilahy. Fifaninanana tanterahina eny amin’ny tora-pasik’i Manakara Be.
Mbola tsy resy mihitsy mantsy ry zareo avy any Toliara, hatreto. Teo amin’ny fihaonan’izy ireo tamin’i Mahajanga, toa ny nanao fanazarantena i Toliara nanoloana an’i Mahajanga. Lavon’izy ireo tamin’ny isa 7 noho 4 ity farany. Teo amin’ny lalao faharoa, dia tafavoaka nandresy nanoloana an’i Tolagnaro tamin’ny moka fohy 4 noho 3 kosa i Mananjary. Lavon’i Morondava tamin’ny isa 7 noho 5 kosa indray i Manakara, mpampiantrano.
Hatreto, mbola samy miady filaharana ireo ekipa avy amin’ny faritra enina mandray anjara amin’ny fifaninanana beach soccer ho an’ny Tournoi Pangalanes 2018. Mbola mitohy kosa ny fifanintsanana.
Ankoatra izay, ny mpanolotsaina manokan’ny Filoham-pirenena, Mbola Rajaonah, sy ny ekipa miaraka aminy kosa no mikarakara ny hetsika Tournoi Pangalanes 2018. Tanjon’izy ireo amin’izany ny hanampiana ireo tanora amin’ny faritra hisian’ny fifaninanana. Hisy, araka izany, mantsy ny fanolorana fitaovana, toa ny ordinatera, sns ho an’ny Lycée Mixte sy ny Lycée Sileny Paul ao Manakara. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena eto Madagasikara, satria hezahin’izy ireo haparitaka amina faritra maro ny fifaninanana ara-panatanjahantena karakarain’izy ireo ho an’ireo tanora sy ny mponina amin’izy ireny.
Rivo Rakotovao, Henry Rabary Njaka, Ulrich Andriantiana, Maharante Jean de Dieu, Rina Andriamandavy, Jaobarison Randrianarivony, Eric Randrasana, Faratiana Tsihoara Eugène, Herisoa Razafindrakoto ary ireo mpanolotsaina manokana dia milaza avokoa fa « malahelo hono ny filoha ...Tohiny